आदिवासी जनजातिले गरे माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन ! मन्त्री लालबाबु पण्डितको राजीनामाको माग || Nepali Online News Portal From Temal
आदिवासी जनजातिले गरे माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन ! मन्त्री लालबाबु पण्डितको राजीनामाको माग
प्रकाशित मिती: मङ्लबार, असार ३१, २०७६
हेम बोम्जन तामाङ
काठमाडौ : लोकसेवाको विज्ञापन विरुद्ध आदिवासी जनजातिहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । लोकसेवा विज्ञापन खारेज गर जस्ता नारा लगाउँदै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी सिद्धान्तलाई लोकसेवा आयोगले लत्याएर कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको भन्दै आयोगको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
यसै गरि लालबाबु पण्डितको पनि राजीनामा माग गर्दै चर्को नारा लगाएको थियो । विभिन्न संघसंस्था लगाएतको ब्यक्तिले एक्यवद्धता सहित अबैधानिक लोकसेवा बिज्ञापन खारेज गर जस्तो नारा चर्केको थियो भने मीन विश्वकर्मा राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि आफ्नो भनाइ राखेको थियो ,यसै गरि थारु आन्दोलनको नेता लक्ष्मान थारु पनि आक्रोश हुँदै प्रधानमन्त्री लाई गाली सम्म गरिएको थियो ।
जनजाति महासंघसहितका संगठनले विरोध गरेको विरोध जनजाति संगठनहरुले बानेश्वरतर्फ ल्याएको जुलुस माइती घरमा जम्मा भएका थिए । सो विज्ञापनमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले असमावेसी भएको भन्दै समावेसी सिद्धान्तका आधारमा विज्ञापन आव्हान गर्न आग्रह समेत गरेको थियो ।
बैतडीमा बोक्सीको आरोपमा एक महिलामाथि कुटपिट
तामाङ परिकारको स्वाद तामाङ कुदाप रेस्टुरेन्टमा
सामुहिक विवाह गरे भोजभतेरको खर्च गाउँपालिकाले दिने !